” ဒါလေးဖတ်ပြီးမှ ဘာလီသွားကြည့်ပါ “ – YANGON STYLE
” ဒါလေးဖတ်ပြီးမှ ဘာလီသွားကြည့်ပါ “
ဘာလီလို့ပြောလိုက်ရင် မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက် မစိမ်းဘူးထင်ပါတယ်။ တစ်ခေတ်တစ်ခါက နာမည် ကျော်ကြားလူကြိုက်များခဲ့တဲ့ အန်တီဖြူသီသီဆိုထားတဲ့ “ပိုလာဘာလီ” သီချင်းကြောင့် ဘာလီကျွန်းလေးဟာ သိပ်ကိုချစ်စရာကောင်းနေခဲ့တာပေါ့။ တကယ်တမ်းလည်း နတ်ဘုရားတို့ ဖန်တီးထားတဲ့အလားအရမ်းကိုလှတဲ့နေရာလေး တွေတစ်စုတစ်စည်း တည်း ရှိနေတဲ့ဘာလီကျွန်းလေးကို Admin ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
အေးဆေး နားအေးပါးအေးတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်စိမ်းစိမ်းစိုစိုလေးတွေပဲငေးပြီးကြည့်ချင်လား……ရတယ်။
ပြီးတော့ ဓါတ်ပုံရိုက်တာဝါသနာပါတဲ့သူတွေအတွက် instagram spot တွေအများကြီး လူကြီးလူငယ်မ ရွေးသွားသင့်တဲ့နေရာတစ်ခုပါ။
Admin တို.သွားခဲ့တဲ့အတွေ.အကြုံလေးကို အသဲတွေအတွက် ပြန်လည်ဝေမျှပေးမယ်နော်…. Admin တို့ကတော့ ပုံမှန်ပို့ နေကြ လူ ၁၆ ယောက်နဲ့ Group tour သွားခဲ့ကြပါတယ်။ ဘာလီက temple တွေချည်းဘဲလည်ရမှာလားဆိုတော့ နိုးပါ။
Adventures/ Parties and Nightlife အကုန်လုပ်လို ့ရတယ်။
ဘာလီ ဆိုတာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ က ကျွန်းဆွယ်တွေအများကြီးထဲ က တစ်ခုဖြစ်လို့ ဘာလီရဲ့ ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာကို အစ္စလာမ် လို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့ ။ ဘာလီမှာအများစုကဟိန္နူဘာသာကိုကိုးကွယ်ကြပါတယ်။ မူဆလင် ၊ ခရစ်ယန် နဲ့ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်အနည်းငယ် စီလည်းရှိပါတယ်။ ဘာလီကျွန်းပေါ်မှာ ဟိန္ဒူကျောင်းပေါင်း ၂၀,ဝ၀ဝ ကျော် လောက်ရှိသလို အိမ်တိုင်း ၊ အိမ်တိုင်းနီးပါးမှာလည်း နတ်က ွန်းတွေ ထားပြီး ကိုးကွယ်လေ့ရှိပါတယ် ။
ဘာလီကိုခုဆို ရန်ကုန်ကနေ တိုက်ရိုက်မရောက်ပေမယ့် transit အနေနဲ့ စင်ကာပူတို့၊ မလေးရှားတို့ကနေ ပတ်ပြီးသွားလို့ရပါတယ်။ လေကြောင်းလိုင်းက Malindo, Air Asia, Singapore airline, Jet star တို့ရှိပါတယ်။ လေယာဉ်ပေါ်မူတည်ပြီး အစားအသောက်ပါမှု၊မပါမှုကတော့ကွာသွားပါတယ်။ AMalindo အဲလိုင်းက budget airline ပါ ၊ သို့ပေမယ့်ကီလို ၃၀ ရပါတယ်။ တစ်ခု ကောင်းတာကလေ.luggage check-through ရတာပဲ။ Air Asia နဲ့ Jet Star ကတော့ ကီလိုဝယ်ရပါတယ် ။ Luggage လည်း check through မရပါဘူး။ Singapore Airline က တော့4stars လေကြောင်းလိုင်းမို့ အသွားအပြန်ကီလို ရန်ကုန်လေဆိပ် ကနေ မလေးရှားလေဆိပ်မှာ လေယာဉ်ပြောင်းစီးရတယ်ဆိုပေမဲ့ luggage ထုတ်စရာမလိုဘဲ..ဘာလီထိ luggage သယ် သွားလို့ရတယ်။ လေယာဉ်ပေါ်မှာ အစားအသောက်မုန့်တို့၊ရေတို့၊ TV တို့၊ Game တွေပါ ဆော့လို့ရလို့ ဟန်ကျတယ်။
အချိန်အားဖြင့် ဘာလီက ရန်ကုန် နဲ့ဆို ၁နာရီခွဲလောက်စောပါတယ်။
ဘာလီက ငွေ ကြေးအ နေနဲ့ ဆို အင်ဒိုနီးရှား ရူပီးသုံးပါတယ်။ မြန်မာငွေနဲ့ ၁၀ ဆကွာပါတယ်။ မြန်မာငွေ ၁၀ဝ ကျပ်က ရူပီး ၁၀ဝ၀ နဲ့ညီမျှပါတယ်။ ငွေ ကြေး အင်မတန် ဖောင်းပွတဲ့နိုင်ငံပါ ။ အနည်းဆုံး ရူပီး ၂၀ဝ၀ လောက်မှအိမ်သာတခါလောက် ဝင်လို့ရပါတယ်။
ဒေါ်လာ ၁၀ဝ လဲရင် အနည်းဆုံး ၁၄သိန်းကျော်လောက်အနည်းဆုံးရလို့ ၊ သိန်းဂဏန်းချီ လို့ တွက်ရတာ used to မဖြစ်ပါဘူး။ ငွေလဲရင်လည်း official money changer တွေမှာ လဲပါ။ တွေ့ ကရာ ဆိုင်တွေမှာ ဈေး အမြင့်ပေးတိုင်း မလဲပါနဲ့။ admin ကိုယ်တိုင် ဒေါ်လာ ၆၀ဝ ဖိုးလဲတာ ၁၀ဝ ကိုဘယ်လိုဖျောက်လိုက်မှန်းမသိ ၊ လက်ထဲမှာတင်ပိုက်ဆံတွေရီရင် အလိမ်ခံရဖူးလို့ ပြောတာပါ။ တကယ်မှန်ကန်တဲ့ ဆိုင်တွေမှာလဲပါလို့ ပြောရင်း ခရီးစဉ်လေး အ ကြောင်းဆက်ကြအုန်းစို့
Day 1 >> Admin တို့ ရန်ကုန်လေဆိပ် ပေါ်က နေ Malindo Airline နဲ့ ညဘက် (၁၁း၅၅)အချိန်နဲ့စထွက်ခဲ့ပါတယ်။ မလေးရှားလေဆိပ်ကွာလာလမ်ပူကို မနက် (၄း၂၀)မှာရောက်ပြီး ဘာလီကိုပြန်ထွက်မယ့်အချိန်က မနက် (၇း၃၅)ဆိုတော့ အချိန်တွေပိုနေသေးလို့ လေဆိပ်မှာ ဟိုလျှောက်ကြည့်၊ ဒီလျှောက်ကြည့်၊ ဓါတ်ဖမ်းနဲ့ ခဏ တဖြုတ်အိပ်ခဲ့လိုက်တယ်။ တစ်ခုကောင်းတာကလေ.luggage check-through ရတာပဲ။ ရန်ကုန်လေဆိပ်ကနေ မလေးရှားလေဆိပ်မှာ လေယာဉ်ပြောင်းစီးရတယ်ဆိုပေမဲ့ luggage ထုတ်စရာမလိုဘဲ..ဘာလီထိluggage သယ်သွားလို့ရတာပါပဲ။ လေယာဉ်ပေါ်မှာလည်း မုန့်ကျွေးသေးတယ်လေ။
Day2>> ဘာလီ လေဆိပ် Ngurah Rai အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကိုရောက်တော့ မနက် (၁၀း၄၅)ရှိပါပြီ။ လေဆိပ်မှာ ဖုန်း Sim Card တွေဝယ်ကြတယ်ပေါ့။ 8 GB ကိုသူတို့ငွေ (၁သိန်းခွဲပါ)။ ကိုယ်တွေက ၄ရက် လောက် နေမှာဆိုတော့အတော်ပဲလေ။ လေဆိပ်မှာပဲ ငွေလဲကြတယ်။ ပြီးတော့အပြင်မှာ ဘာလီတိုးလီဒါ ကစောင့် နေ ပြီး ကားလေးနဲ့ တရုတ် စားသောက်ဆိုင်ကိုနေ့လည်စာစားဖို့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ စားသောက်ဆိုင်က view တအား လှပဲ။ စားသောက်ဆိုင်ထဲကနေ အပြင်မှာရှိတဲ့ ကန်ရေကိုလှမ်းမြင်နေရတယ်။ water activity လည်းအချိန်ရရင် လုပ်လို့ရသေးတာ။ ကိုယ်တွေကတော့ နေ့လည်စာပဲစားပြီးဘာလီ ရဲ့ နာမည်ကျော် သဲသောင်ဖြူဖြူဖွေးဖွေး၊ တောင်တန်းတွေကာရံထားတဲ့ Pandawa ကမ်းခြေကို သွားခဲ့ကြတယ်။ ပြီးတော့ ဘာလီရောက်မှတော့ မသွားမဖြစ်ရောက်အောင်သွားရမယ့် နေရာ Uluwatu Temple ကိုလည်းသွားလိုက်ကြတယ်။ သူက အဝင်ဝမှာ အတိုနဲ့စကပ်တို့ဘောင်းဘီ တို့ ဝတ်လာတယ်ဆိုသူတို့အဝတ် ဝတ်ပြီး ခါးမှ🧡လိမ္မော်ရောင်အစည်းလေးစီးပြီးမှ အထဲဝင် ရပါတယ်။ အထဲမှာ မျောက်တွေရှိပါတယ်။ 🐒🐒သူတို့ကို မျက်စေ့ဆုံမကြည့်ဖို့နဲ့ သွားမစဖို့ ဂိုက်ကမှာထားတော့ ကိုယ် တွေမှာ ခပ်သွက်သွက်လေး လမး်လျှောက်၊ အဲ့ Temple မှာပဲနေဝင်ဆည်းဆာ ကြည့်ပြီး ဘာလီလူမျိုး တွေရဲ့ နာမည်ကြီးရိုးရာအက Kecak Fire အကကို ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ဆီမှာထူးခြားတာက ဘာ တူရိယာ မှမသုံး ဘဲ ယောကျာ်း အယောက် ၇၀ ရဲ့ ပါးစပ်ကထွက်တဲ့အသံကိုပဲ အသုံးချသွားတာပါ။ ကိုယ်ကြား တာကတော့ ‘ကြက်…ကြက်…ကြက်…ကြက်… ကြက်..ကြက်..ကြက်..ကြက်.. နဲ့ အေးရာ..အေရာ.. အေး ရာ..အေရာ” ဆိုတာပဲ။ ပြဇာတ်အကြောငး်က သီတာ ၊ဒသာဂီရိ နဲ့ ရာမဇာတ်ပါ။ အဲထဲမှာ ဟာနုမာန် မျောက ်သရုပ်ဆောင် ထားတဲ့တစ်ယောက်က တော်တော်မိုက်တယ်။ အပေါ်ကနေ ခုန်ချတာတွေ..မီးတွေဝိုင်းပြီး သူ့ကိုကြိုး တုပ်ဖမ်း ပေမယ့် မီးကိုခြေထောက်နဲ့ကန် ထုတ် တာတွေ🔥🔥…ပရိတ် သတ်တွေကြားထဲသွားပြီး သန်းရှာပေးတာ တွေနဲ့ တဝါးဝါး ..တဟားဟားနဲ့ပွဲကိုစည်နေတော့တာ။😂😂 အဲ့ကအပြန် နာမည်ကြီး Jimbaran ကမး်ခြေမှာ ပင်လယ်စာကို တစ်ယောက်ကို တစ်ပန်းကန်အဝိုင်းနဲ့ ♨️🐠🐙🦑🦐အရသာရှိရှိသုံးဆောင်ပြီး ဟိုတယ် ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။ သူတို့အစား အသောက်ကလေ ချိုတော့ချိုတယ်။ အချိုမကြိုက် တဲ့သူတွေရှိရင်တော့ရန်ကုန်ကနေ ကိုယ်စားတတ်တဲ့ အစားအစာလေးတွေ သယ်ခဲ့ပါလို့။
ဘာလီမှာ တည်းမယ်ဆိုရွေးချယ်စရာနေရာတွေတော်တော်လေးကို များပါတယ်။
1 ) Kuta Beach : သူကတော့ ဘာလီ ရဲ့ ဈေးအပေါဆုံး hotel တွေရှိတဲ့နေရာပေါ့။ ညဘက်ဆို nightlife တွေ shopping mall တွေစည်ကားနေတာ။ ဈေးဆိုင်တွေလည်းအားကြီးပဲ။ ဒါမဲ့ဆိုင်တွေက ည 10 နာရီ ဆိုပိတ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်က ABC ဆိုင်လေးတွေလို သူတို့မှာလညး် Mini Mart တို့၊circle k တို့ဆိုပြီးရှိတယ်။
2) Seminyak Beach : ဒီကမ်းခြေက တော့ kuta beach နဲ့ တစ်ဆက်ထဲ ရှိတဲ့ ကမ်းခြေပါပဲ။. သူက ဈေးကြီး ပါတယ်။ fine dining တွေ နဲ့ bar တွေ ကမ္ဘာ အဆင့်မှီတဲ့ club တွေ နဲ့အကုန်လုံးနီးပါးရှိတယ်။ kuta ကနေ ကျော်သွားပြီးရင် Seminyak ထဲရောက် သွားရင်ကို ချက်ချင်း အာရှကနေ အနောက်တိုင်း ရောက်သွားသလို ခံစားမိစေမှာပါ။
3) Ubud : ဒီနေရာကတော့ ကမ်းခြေ မဟုတ်ပါဘူး.ဘာလီကျွန်းရဲ့ တောင်တွေဝန်းရံလျက်ရှိတဲ့ လှေကားထစ် စပါးခင်းတွေ၊ ဘုရားကျောင်းတွေ နဲ့ ဘာလီသားတွေ နေထိုင်နေဆဲ သူတို့ရဲ့ ways of life တွေကိုခံစားနိုင် တဲ့ ရွာလေးပါပဲ။ သူ့မှာလဲ တကယ့် luxurious resorts တွေ villa တွေ အများကြီးပါပဲ။ honeymooner တွေအတွက်လဲ တကယ့်ကို Romantic ဖြစ်စေတဲ့နေရာလေးပါပဲ။
4) Nusa Dua : မိသားစု နဲ့ လာတဲ့ လူတွေ .. ဟန်နီးမွန်းအတွက်လာတဲ့ လူတွေ ..အများဆုံးနေဖို့သင့်တော်တဲ့5stars hotel တွေ ကြီးပဲစုထားတဲ့နေရာပါ။ သူ့ကို သင်္ဘောနဲ့ထပ်သွားမှရောက်နိုင်ပါတယ်။
Day3>>ဒီနေ့ကတော့ Admin တို့အားခဲထားတဲ့ water activities လုပ်တဲ့ရက်ပါ။ အဲလို လုပ်ဖို့က Tanjung Benoa ဆိုတဲ့ကမး်ခြေကိုသွားရပါတယ်။ အရင်ကဆိုသူက တံငါရွာ သာသာပါပဲ။ ခုကျမှ ဇိမ်ခံဟိုတယ်တွေ၊ ကမ်းခြေမှာ ဆော့ဖို့ water activities တွေ လုပ်လာလို့ပိုပြီးစည်ကားလာတယ်ပြောပါတယ်။ ကိုယ်တွေအဖွဲ့ထဲက ၂ယောက်က parasailing adventure လုပ်ပြီး ကျန် ၈ယောက်ကတော့ sea walker လုပ်ကြပါတယ်။ လုပ်လို့ရတဲ့ activities တွေက Parasailing (၁ ယောက်), Parasailing Adventure (၂ယောက်), Banana boat, Jet Ski, Glass Bottom Boat, Donut slider, Diving, Snorkeling, Sea Walker, Jigging Fishing, Fishing, Spear Fishing, Mangrove Tour, Dolphin tour နဲ့ Turtle island တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ 🏄♀️🏄🏊♀️ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ကစား နည်းကို ကိုယ့်ဖာ သာပေးပြီးဆော့ရုံပဲ။ အကုန်သူဆော့လို့အပြီးမှာတော့ လိပ်ကျွန်းကိုသွား လည်ကြပါတယ်။ 🐢🐢လိပ်ကျွန်းမှာ လိပ်မိသားစုတွေ၊ မြွေတွေ၊ ဇီးကွက်၊ သစ်တောက်ငှက်နဲ့ ကော်ဖီလုပ်တဲ့ ကြောင်ကတိုးတို့ကိုပါ မွေးထားတာကို တွေ့ခဲ့ရတယ်။ relax အနေနဲ့ fish massage လညး်လုပ်လို့ရတယ်။ အဲ့ကျွန်းကနေပြန်လာပြီး Chopstick ဆိုတဲ့ တရုတ်ဆိုင်မှာ နေ့လည်စာ စားခဲ့ကြတယ်။ ပြီးတော့ ပင်လယ်ကမ်းစပ်နားမှာ တည် ဆောက ်ထားတဲ့ Tanah Lot temple ကိုလညး်သွားပြီးလည်ပတ်ပါတယ်။ သွားတဲ့လမ်းတောက်လျှောက်မှာ ဈေးဆိုင်တွေအားကြီးပဲ။ ကြုံ လို့ shopping လုပ်လို့ရသေးတယ်နော်။ 🛍 အပြန်ညစာကို တရုတ်ဆိုင်မှာ ပဲ သုံးဆောင်ပြီး ဟိုတယ်ကိုပြန်လာ ခဲ့ပါ တယ်။
Day4>> ဟိုတယ်မှာ မနက်စာသုံးဆောင်ပြီးတော့ admin တို့ ဘာလီရဲ့ အထင်ကရနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Bali Swing ကိုသွားခဲ့ကြပါတယ်။ သူက နာမည်ကြီးလာတာ သိပ်မကြာသေးဘူး။ အုန်းပင်၂ပင်ကို ကြိုးနဲ့ချည်ပြီး ပုခက်လုပ်ထားတာ။
ငယ်ငယ်ကပုခက်စီးခဲ့သလို။ ဒါမဲ့သူက အောက်မှာ ချောင်းရှိပြီး အရှေ့ဘက်မှာ သစ် ပင်တွေ အုံ့ဆိုင်းနေတဲ့ မြင်ကွငး်ကိုမြင်ရတာ..ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်။ တချို့က အဲ့မြင်ကွငး်ကိုကြည့်ပြီး ဒန်း စီးကြတယ်။ တချို့ အဲ့မြင်ကွင်းကိုကျောခိုင်းပြီးစီးကြတယ်။ အမှန်က မြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးစီး ရတာပိုမိုက်တာ။ လူတော့ တန်းစီရတယ်။ သူကဒန်းစီးတာတင်ဘယ်ကမလဲ..ငှက်သိုက်တို့၊ ကျောက်တောင်ပေါ်မှာတပ်ရိုက်တာတို့၊ အိပ်ယာပေါ်တို့၊ ဆိုဖာပေါ်တို့တောင်ပါသေးတာ။ အချိန်လညး်မရလို့ ၃မျိုးပဲလုပ်ခဲ့ရတယ်။ ပြီးတော့ မီးတောင် ဒေသဖြစ်တဲ့ Kitamani ကို သွားပြီး မီးတောင်အလှကိုကြည့်ပြီး နေ့လည်စာစားခဲ့ကြသေးတာ။ ဆက်လက်ပြီး Holy Spring Water Temple ကိုသွားခဲ့ကြတယ်။ မေလက ဟိန္နူလူမျိုးတွေရဲ ့ဥပုသ်စောင့်တဲ့လ ဆိုတော့ အဲ့ Temple မှာ ဘုရားရှိခိုးနေကြတဲ့လူတွေနဲ့ စိတ်အညစ်အကြေးတွေ သန့်စင်စေတဲ့ရေနဲ့ရေချိုးသန့်စင်နေကြတဲ့ လူတွေနဲ့ စည်ကားနေရော။ ပြီးတော့ ကြောင်ကတိုး ရဲ့ မစင်ကနေကော်ဖီထုတ်လုပ်တဲ့ ☕️☕️Sebatu Coffee ခြံကိုသွားလည်ကြပြီး ကော်ဖီတွေ တစ် ခွက်ပြီးတစ်ခွက် မြည်းစမ်းကြည့်ကြတယ်။ ပြီးရင်ကိုယ်ကြိုက်တဲ ့အရသာ ကော်ဖီအတိုင်း လက်ဆောင် ဝယ်သွားလို့ရတယ်။ နောက်တစ်ခုက facebook နဲ့ instagram spot အဖြစ် နာမည်ကြီးနေတဲ့ Tegalalang Rice Terrace လှေကားထစ်စိုက်ခင်း ဆီသွားပြီးဓါတ်ဖမး်ကြေ သးတယ်လေ။
ဘာလီမှာနာမည်အကြီးဆုံး.အင်ဒိုနီးရှားပါတိတ်များကိုရောင်းချပေးနေတဲ့ဆိုင်ကိုလညး်ဝင်ရောက်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ hand-made လုပ်ထားတဲ့ပါတိတ်အစစ်တွေဆိုတော့ ဈေးတွေက ခေါင်ခိုက် နေတာ။ ပါတိတ်ကိုအမြတ်တနိုးထားပြီး ဝတ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ ဝယ်သင့် ပါတယ်။သူကအစစ် ကိုး။ အဲ့ကနေ Admin တို့ ဘာလီCultural show ပြတဲ့စားသောက်ဆိုင် မှာ ညစာသုံးဆောင်ပြီး ဟိုတယ်ကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်။
Day5>> ဟိုတယ်မှာမနက်စာစားပြီးတာနဲ့ လေဆိပ်ကို (၁၀)ခွဲမှာစဆင်းခဲ့ပါတယ်။ အလာကအတိုင်း မလေး ရှား ကွာလာလမ်ပူလေဆိပ်မှာ transit စောင့်စီးပြီး အမိမြန်မာနိုင် ငံ ကိုညဘက်(၁၁)နာရီမှာပြန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
အရမ်းပျော်ဖို့ကောငး်တဲ့ ခရီးစဉ်လေးနော်…ဓါတ်ဖမ်းတာဝါသနာပါတဲ့လူတွေအတွက်လညး် နေရာလှလှလေးတွေဆိုတာလညး်အများကြီးမှအများကြီးပဲ..လစဉ်လည်းခုလိုဘာလီတိုးလေးတွေရှိနေမှာမို့..တစ်လမမှီ.နောက်တစ်လလိုက်ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ တခြားစိတ်ဝင်စားစရာ ခရီးစဉ်တွေကတော့ ထိုင်ဝမ်၊ ကိုရီယား၊ စင်ကာပူ၊ ဗီယက်နမ် (ဟနွိုင်း-ဟလောင်း)၊ ဂျပန် တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အရင်ဦးဆုံး စာရင်းပေးတဲ့သူတွေကိုလညး် Discount လေးတွေရှိတတ်လို့ page :www.facebook.com/royalactivetravels/ ကို like & see first လညး်လုပ်ထားပါလို့။ #Balireview #Baligrouptour #BaliwithRoyalActive
တိုက် (၃၇) ၊ အခန်း (၁၁) ၊ ရွှေအုန်းပင်အိမ်ယာ ၊ (၅) ရပ်က ွက် ၊ ရန်ကင်းမြို ့နယ်။
Credit : Royal Active Travels
Link : https://www.facebook.com/royalactivetravels/?